Tutorial PoEdit: ahoana ny fandikana tetikasa rindrambaiko maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Raha mamaky an'ity ianao dia azo inoana fa efa niditra tao amin'ny atody mahafinaritra an'ny fandikan-teny. Miarahaba anao ary ... faharetana. Ny zava-drehetra dia ianarana amin'ny fotoana sy ny faniriana.Raha te handika ianao mba hanomezana ny voam-pasinao amin'ny tontolon'ny free software (na mila fitaovana ianao hanampiana safidy fiteny amin'ny tranokala), ary ny nandrasanao dia lahatsoratra tsotra amin'ny teny anglisy (ohatra) hamindra izany amin'ny fiteny hafa, dia ho tsapanao (araka ny nolazaiko ny tenako) fa tsy toa izany tsotra.
Saingy tsy dia sarotra kokoa. Amin'ireto andalana fohy ireto dia manandrana manazava ny tranga mahazatra izahay, izany hoe ianao no voatendry a rakitra amin'ny endrika .pot mandika.
1 Inona no atao hoe PoEdit?
2 Rakitra modely sy fisie fandikanteny
3 Fa raha handika avy amin'ny modely…?
4 Fametrahana sy fikirakirana
5 Miara-miasa amin'ny rakitra .po
6 Inona izany no manjavozavo?
Inona no atao hoe PoEdit?
Fitaovana fandikan-teny i Poedit, nefa mitandrema, aleo tsy afangaro amin'ny mpandika teny izany.
Misy programa hafa izay manana fampiasa mitovy fa mieritreritra aho fa ny PoEdit no be mpampiasa indrindra. PoEdit dia tsy mandika toy ny programa iray izay ny tanjony dia izany fa manampy antsika amin'ny lahasa handika lahatsoratra avy amin'ny fiteny iray amin'ny fiteny iray hafa. Izany hoe, hanolotra tarehin-tsoratra amina litera amin'ny fiteny iray ary isika no tokony handika azy ireo amin'ny fiteny irina.
Raha ny tokony ho izy dia mety hanontany ny olona iray ary mila programa iray aho amin'izany? Maninona raha mampiasa mivantana ireo mpanonta lahatsoratra toy ny gedit na ny notepad windows? Tsotra be ny valiny: PoEdit dia mamoaka vokatra azo avy amin'ireo tadin'ny voadika amin'ny endrika voaomana hampidirina mivantana ao amin'ny lahatahiry mpizara izay mitahiry ireo pejy amin'ny html, code php, sns. noho izany dia hoekena ho rakitra fandikan-teny miasa avy hatrany izy ity rehefa apetraka ao amin'ny lahatahiry rakitra fandikan-teny. Mazava ho azy fa mety (ary matetika) misy fisie mihoatra ny iray ao amin'ireto lahatahiry ireto natokana hitahiry ireo fandikan-teny amin'ny fiteny samihafa, izay ahitàna fampahalalana momba ny inona sy ny fomba hanehoana ireo tarehin-tsoratra amin'ny fandikan-teny.
Ny rakitra izay tantanan'ny PoEdit dia rakitra modely, miafara amin'ny extension .pot, fisie fandikan-teny, miafara amin'ny extension .po sy file.mo, izay rakitra voaangona izay mahatonga ny fidirana haingana kokoa. Ny farany dia noforonina ho azy raha toa ka faritanay ao amin'ny fikirakirana PoEdit.
PoEdit dia misy amin'ny kinova ho an'ny GNU / Linux, Windows ary Mac OS X.
Rakitra modely sy fisie fandikanteny
Tadidinao ve ny fomba fikirakiran'ny mpandika teny iray ny modely? Eny, zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny PoEdit. Ny fisie template dia mirakitra ireo tadiny ho adika ary toerana natokana ho an'ny angona sasany izay hofenoina rehefa manomboka ny fizotrantsika. Ireo angon-drakitra ireo, ankoatry ny tadiny ara-bakiteny sy nadika ara-bakiteny, ohatra, ny anaran'ny mpandika teny farany (satria ny asa dia mety natomboky ny mpandika teny fa tsy noferan'ny mpandika teny), ny anaran'ny ekipa mpandika teny, ny tarehintsoratra napetraka , sns. Izy ireo dia toy ny karazana metadata izay manome fampahalalana momba ilay rakitra fandikan-teny.
Fa raha handika avy amin'ny modely…?
Manaova kopian'ny modely fotsiny amin'ny rakitra hafa izay homenao anarana amin'ny fomba mitovy ihany fa amin'ny fanitarana .po Eny, tsy mitovy amin'ny fomba mitovy, satria fantatrao izay fiteny itodihany
Raha hadika ny tena izy dia tsy maintsy ampiana kaody misy tarehimarika roa amin'ny faran'ny anaran'ny fisie modely, alohan'ny fanitarana.
Andao hatao hoe tranonkala iray amin'ny teny Anglisy. Ny pejiny lehibe dia antsoina hoe index.html, raha handika azy io dia tsy maintsy manana rakitra modely antsoina hoe index.pot (ny làlana avy amin'ny index.html mankany amin'ny index.pot dia dingana iray hafa izay tsy hidirantsika). Rehefa manana an'io rakitra index.pot io dia soloinay fotsiny ho index.es.po, raha ny Espaniola no fiteny handikanay azy.
Raha vao nomena anarana toy izany ny rakitra dia afaka manomboka manodina azy amin'ny PoEdit isika.
Amin'ity sary manaraka ity dia manana sombintsombin'ny rakitra .po izay ahitanao ny tadiny hadika (izy ireo no manaraka ny msgid ara-bakiteny amin'ny teny nalaina) ary ny toerana handehanan'ny tadin-tsika navoakanay tamin'ny PoEdit (ao anatin'ireo teny nalaina manaraka ny ara-bakiteny) msgid.
Raha mipoitra ny fanontaniana ary tsy afaka manitsy ny rakitra .po aho ary mametraka ny dikanteny mivantana eo anelanelan'ny marika nalaina manaraka ny msgstr?, Ny valiny dia Eny, na dia milamina kokoa sy milamina kokoa aza ny fanaovana azy amin'ny PoEdit (tsy lazaina intsony fa ilaina ny miditra amin'ny tanana tsara amin'ny toerana marina ilay metadata noresahintsika teo aloha, ary tsara kokoa ny mamela an'io asa io any amin'ny PoEdit; koa tsy hanana safidy hanokatra ny rakitra .mo voangona)
Amin'ity sary manaraka ity dia manana lohatenin'ny rakitra .po ianao izay hiseho ny metadata momba ilay fisie:
Ao amin'ny rakitra .pot dia tsy ahitana fampahalalana ity metadata ity, raha ao amin'ny fisie .po kosa dia miseho ny fampahalalana manondro ny singa tsirairay.
PoEdit dia tonga ao amin'ny trano fisakafoanana GNU / Linux ho an'ny Debian 6.0 stable / main. Heveriko fa ho an'ny disto hafa mifototra amin'ny fonosana .deb, noho izany dia mivantana ny fametrahana azy ireo, na mampiasa fampiharana toa ny Synaptic na ny mpitantana ny baikon'ny baiko apt, amin'ny endrika
apt-mahazo mametraka poedit
Aorian'ny fametrahana azy dia miditra amin'ny programa isika ary manohy mamaritra ny safidintsika ao amin'ny Fanontana → Preferensi, izay hametrahanay ny anaranay sy ny adiresy mailaka. Ny ambiny azontsika atao, amin'ny fitsipika, dia mamela azy araka ny anoloran'i Poedit azy.
Miara-miasa amin'ny rakitra .po
Voalohany dia manamboatra ny rakitra aminay amin'ny Catalog-> Safidy araka izay aseho amin'ity sary manaraka ity:
Zava-dehibe ny famenoana ny fizarana Plural Forms amin'ny tadin'ny nplurals = 2; maro = n! = 1; Hataonao amin'ny fomba manokana ny ambiny.
Ao amin'ny takelaka Folders dia hisafidy malalaka ny lahatahiry ao amin'ny solosaintsika izay tiantsika hananana fandikan-teny,
Aorian'ny fanaovana an'io dia ho hitanao raha te hanokatra ny rakitra .po ianao miaraka amina mpandahatra lahatsoratra tsotra izay niova ny meta-data noresahinay.
Vonona ny rehetra handika ny tadiny izay hiseho eo amin'ny efijery PoEdit lehibe miaraka amina endrika mitovy amin'ireto:
Izay efa nandikantsika sy nampidirinay tao amin'ny varavarankely ambany ny fandikana ny tadiny hita etsy ambony. Mijanona fotsiny mba hamonjy ireo fanovana.
Inona izany no manjavozavo?
Rehefa tsy mazava amintsika ny fandikana kofehy fa haintsika ny manakaiky ny fandikana azy dia tsy maintsy asiantsika marika manjavozavo. Amin'ity tranga ity dia tsy feno ny fandikan-teny ary ny rakitra .po dia azo alefa amin'ny mpandika teny hafa izay handinika ireo tadiny ireo (raha ny tena izy, ao anatin'ny dingan'ireo mpandika teny sy mpandinika maro, nojerena avokoa ny zava-drehetra)
Ary, amin'ny faran'ity fampianarana kely ity, dia holazaiko aminao fa ny fahitana ny lahatsoratra feno dia ilaina fa tsy voarafitra amin'ny andalana araka izay natolotry ny PoEdit.
Mba hitrandrahana ny lahatsoratra amin'ny teny Espaniôla fotsiny dia ampiasainay ny baiko po2txt:
-w 75 dia manondro ny sakan'ny tsipika amin'ny tarehin-tsoratra 75.
(tsy maintsy apetrakao ny fonosana gettext sy translate-toolkit)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Tutorial PoEdit: ny fomba fandikana tetikasa rindrambaiko maimaimpoana
Pehuén Raineri dia hoy izy:
AL poedit raisiko tsara, tena tsara ny fanazavana fa rehefa te hamoaka ilay lahatsoratra aho dia mandefa lesoka. Tokony apetrakao ny lalan'ny fisie?
mandeha amin'izay azoko:
mpampiasa @ ubuntu: ~ $ po2txt -w 75 anglisy.po anglisy.txt
fanodinana rakitra 1 ...
po2txt: fampitandremana: Fikarakarana lesoka: fampidirana English.po, famoahana English.txt, template tsy misy: [Errno 2] Tsy misy rakitra na lahatahiry toy izany: 'English.po'
mpampiasa @ ubuntu: ~ $ po2txt -w 75 ^ Cglish.po English.txt
Valiny tamin'i Pehuén Raineri
Do Xa dia hoy izy:
Raha liana amin'ny fitadiavana rindrambaiko web, rindrambaiko PC, rindrambaiko finday na karazana rindrambaiko hafa ianao dia amporisihiko amin-kafanam-po ity fitaovana fametrahana toerana haingana sy intuitive ity: http://poeditor.com/.
Valiny amin'i Do Xa
anymex dia hoy izy:
Heveriko fa very tao amin'ny ampahany amin'ilay lahatsoratra aho nefa tsy azoko hoe, ho inona ireo rakitra ireo?
Ho an'ny fandikan-teny amin'ireo programa samihafa, raha te hanampy amin'ny fandikana tetikasa amin'ny fiteny hafa ianao (toa ny Pidgin, Qcomicbook sns sns) ny fenitra ampiasaina dia ity karazana rakitra ity satria noho ny antony nohazavaina tao amin'ilay lahatsoratra dia manamora ny asa ilay asa. .
Misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisanao anjara, manazava ny fisalasalana maro tao amiko izy io, satria na dia misy aza tetik'asa sasany mamela ny fandikan-teny mivantana amin'ny Internet na ny Launchpad toy ny fanaon'i Marlin, ho an'ny maro an'isa ny format .po dia nampiasaina ary mbola tsy nazava tamiko ny fanontana nataony!
Raha misy olona afaka mampiasa:
Misy pejy iray izay adika miaraka amin'ny Google sy Microsoft miaraka:
Diego Bruschetti dia hoy izy:
programa toa ny OmegaT? tsy mandeha io?
Valiny tamin'i Diego Bruschetti
erknrio dia hoy izy:
Miala tsiny amin'ny tsy fahalalako fa niezaka namorona ny tranonkalako tamin'ny fiteny maro aho ary tsy fantatro ny fomba nanaovana ireo fandikan-teny, avelao aho hanazava:
Manana default .po amin'ny teny fototra Espaniôla (Espana) aho ary mamorona iray hafa handika izany amin'ny teny anglisy en_EN. Ny tsy fantatro dia ny fomba ahafahako manamarina fa mavesatra ny fandikan-teny. Miorina mandeha ho azy miorina amin'ny fitenin'ilay mpitsidika mpitsidika ve izany? Tokony hamorona rakitra antonony ve ianao? Tokony apetrako ve ireo sainam-pirenena mahazatra ary arakaraka izay tsindry iray izay, fandikana iray na iray hafa no entina?
Raha ny marina dia tena vaovao tokoa aho amin'ity ary manomboka mampiasa poedit toy ny fahalalana ny zavatra rehetra ao ambaniny izay :(.
Fanamarihana: mampiasa poedit aho amin'ny Windows 7 64bits sy amin'ny fiteny .po (rehefa namorona katalaogy vaovao) dia tsy nahazo dropdown aho. Nametraka teny espaniola sy anglisy fotsiny aho.
Mamaly an'i erknrio
Selena dia hoy izy:
Salama! Raha liana amin'ny toerana misy karazana rindrambaiko ianao dia amporisihiko am-pitiavana ity fitaovana fitadiavana haingana sy mailaka ity: http://poeditor.com/.
Mamaly an'i selena
natali dia hoy izy:
Mampiasa poedit aho raha handika lahatsoratra ary tiako ho fantatra hoe ahoana ny fanisana ny tarehin-tsoratra efa nadikako ary hahafahako manao kaonty hanangonana izay nadika, tsy mahita fomba hanisana ireo tarehintsoratra nadika…. Azo atao ve izany?
Mamaly an'i natali
xero dia hoy izy:
afaka manao kaonty hanangonana izay adika?
Heveriko fa tsy mbola hitanao tsara ny fandehan'ny lohahevitra, marina
vakio ny fahazoan-dàlana gpl
Mamaly an'i xero
Tsy azonao atao izany, ny hany tokony hatao dia ny mandika ireo fehezanteny ireo amin'ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra (mpanoratra birao maimaimpoana, teny, sns.) Ary eo no ahitanao ny isan'ny tarehintsoratra ao anatin'ireo fehezanteny.
Raha handika amin'ny fiteny hafa ianao, ny fampahalalana momba ny pluraly ao amin'ny Catalog-Properties: Plural Forms Forms dia hita ao amin'ny: